Nike Run Club yakavandudzwa yeApple Watch uye iPhone | Ndinobva mac
Nike Run Club inogadziridza yeApple Watch uye iPhone
Iyo quintessential inomhanyisa app kune vazhinji vanomhanya, Nike Run Kirabhu gamuchirai vhezheni nyowani iyo inonakidza nhau inowedzerwa kuti uzive ruzivo rweamarudzi ako. Ehe, mune ino kesi kuvandudzwa kunoitwa mune yekushongedza chikamu uye muNike twilight mode.
Uye zvakare, iko kunyorera kunovandudzwawo kune madivaysi eIOS, saka mune izvi vhezheni itsva 6.6.0 zvimwe zvakakosha zvikamu mukushandisa zvakagadziridzwa. Ichokwadi ndechekuti kumhanya ndeimwe yeakanakisa maapplication atakawana, kunyangwe chiri chokwadi kuti pano chirevo "chekuravira, mavara" chinogona kutorwa sekutanga nekuti kune akawanda anonakidza maapplication evamhanyi.
Iwo matsva maficha anoitwa anoenderana nerudzi rwemujaho nhanho izvo izvozvi, iri nhangemutange chikamu chevara rinogona kuonwa mukati meiri mujaho wese uye ne mavara akasiyana kusiyanisa pakati pemakiromita akafamba nepakati yeyero, orenji, girini, bhuruu, pepuru kana lime. Chaizvoizvo izvi zvinoshanda kutikurudzira kumhanya zvishoma uye kuramba tichidarika zvinangwa zvedu kana zvasvika pakumhanya.
Hongu, ndinoziva kuti chikamu chisina kunaka cheiyi vhezheni nyowani ndechekuti hatizokwanise kuyedza kunze kwemusha nekuda kwenzvimbo yemaaramu yakatemwa naCovid-19, asi chero zvakadaro tinogona kumaka mujaho pakati pekoridho uye imba yekudyira kana isu tanzwa nezvayo, kana vane rombo rakanaka vanogona kuishandisa iyo tepi. Chero zvazvingaitika chakakosha mazuva ano kufamba kwete kurasikirwa nechimiro, saka huya urove zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nike Run Club inogadziridza yeApple Watch uye iPhone
Chii chakashata neZoom yeMac chirongwa?
Seta alarm paSonos kuti umuke kumimhanzi yako yaunofarira